Shaqo iyo Waxbarasho
Dimuquraadiyada iyo ka qeyb qaadashada
Ku noolashada dalka Iswiidan
Naseexooyin iyo taageero
Ku cusub Gobolka Stockholm
Boggan waxaa loogu talagalay dadka ku cusub dalka Iswiidan ee ku nool gobolka Stockholm. Xarunta wacyigalinta bulshada ee gobolka Stockholm oo ka dambeysa bogga internetka, ayaa hoggaamisa koorasyada barashada bulshada ee luqadda hooyo ee ku saabsan bulshada Iswiidhishka ah. Muddada 100 saacadood waxay dadka soo galootiga cusubi baran doonaan sida bulshada Iswiidhan u shaqeyso iyo xuquuqdooda iyo waajibaadka.
Qayb ka mid ah macluumaadka koorsada waxaa sidoo kale laga heli karaa bogga internetka luqadaha iswidhishka, ingiriiska, carabi, faarsi, tigrinya iyo soomaali. Xulo luqad adiga oo gujinaya meesha luqadaha ee bogga qaybtiisa sare. Nala soo xidhiidh haddii aad su’aalo qabto ama aad rabto macluumaad dheeraad ah: